आज विजया दशमी,आज कुन-कुन राशि हुनेहरुको भाग्य कति प्रतिशत ? हेर्नुहोस् । - jagritikhabar.com
आज विजया दशमी,आज कुन-कुन राशि हुनेहरुको भाग्य कति प्रतिशत ? हेर्नुहोस् ।
वृष – कुनै हटाउन नसकिने परिस्थितिले केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। तर तपाईंले आफ्नो समतोलन राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ र समस्याको समयाधान गर्ने तुरुन्तै प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन। नयाँ अनुबंधहरू आकर्षक लाग्न सक्छन्, तर चाहेको लाभ दिन सक्दैनन् – पैसा लगानीको विषयमा हतार गरेर निर्णय नलिनुहोस्। आफ्नो परिवारका साथ कठोर व्यवहार नगर्नुहोस् – यसले शान्ति बिगार्न सक्छ। आफ्नो प्रिय संगै नभएकोले तपाईंले आज परम आनन्दबाट खाली भएको अनुभव गर्ने सम्भावना छ। काममा निरन्तर परिवर्तनबाट तपाईंलाई लाभ हुनेछ। खुशीयाली यात्रा सन्तोषजनक हुनेछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई आफ्नो नराम्रो पक्ष देखाउन सक्छ।
मिथुन-घाँटी / पिठ्युँको लगातार दुखाइले पीडित हुन सक्नुहुन्छ। सामान्य कमजोरी पनि भएमा यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। आज अरू सबै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। खर्चमा वृद्धि हुन्छ तर आयमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई तिर्न सजिलो पर्नेछ। आफन्त र साथीहरूबाट अप्रत्याशित उपहार र इनामहरू। प्रेमको चस्काले तपाईंलाई आज सुत्न दिंदैन। मालिकको राम्रो मुडले काममा सम्पूर्ण वातावरण कर्ममय बनाउन सक्छ। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नो जोडीसँग तनाउमुक्त दिन बिताउनु हुनेछ।
कर्कट-आफ्नो उच्च आत्मिक शक्तिको बाबजुद तपाईं आज तपाईंसँग हुन सक्ने कसैको याद गर्नुहुनेछ। आर्थिक सुधार निश्चित छ। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। यस दिन तपाईं वरिपरि गुलाबको खुशबू हुनेछ। प्रेमका परमानन्दको आनन्द लिनुहोस्। साहसपूर्ण कदम र निर्णयले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ। तपाईंको सञ्चार प्रविधी र काम कौशल प्रभावशाली हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित साँच्चै नै रोमाञ्चक केही गर्नु हुनेछ।
शिंह-तपाईंले परिस्थितिलाई जित्नु भयो भने पीर हराउनेछ। तपाईंले यसलाई साहसको पहिलो स्पर्शमा फुट्ने साबुनको फोकाजस्तो हो भनेर बुझ्ने सम्भावना छ। संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। आफ्नो जोडीसँग बस्दा सान्त्वना, प्रेम र राहत पाउनुहोस्। प्रेम सम्बन्ध बारे चर्को हल्लाखल्ला नगर्नुहोस्। तपाईं एक दिनको बिदामा जानु हुँदैछ भने चिन्ता नगर्नुहोस् – तपाईंको अनुपस्थितिमा पनि काम सजिलै चल्नेछ। कुनै अनौठो कारणले गर्दा समस्या भएमा – तपाईं फर्केर आएपछि यसलाई सजिलै समाधान गर्नुहुनेछ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। आज तपाईंको जोडीले तपाईंको आवश्यकतालाई सन्तुष्ट गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ, जसले गर्दा अन्ततः तपाईंलाई निराशा हुन सक्छ।
कन्या-आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्याउनेछ। छोरीको रोगले तपाईंको मुड बिगार्ने छ। उनलाई रोगबाट मुक्ति दिलाउन आफ्नो प्रेम दिनुहोस्, जसले उनको हौसला बढाउनेछ। प्रेमको शक्तिमा निको पार्ने ठूलो शक्ति लुकेको हुन्छ। आज रोमाञ्चक दिन हुनेछ किनकि तपाईंले आफ्नो प्रियबाट उपहार / इनाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। कामको समयमा कसैले तपाईँको योजना बिगार्ने प्रयास गर्न सक्छ – त्यसैले तपाईंले वरिपरि के भइरहेको छ भनेर सावधान हुनु आवश्यक छ। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई यस्तो काम गर्न सक्नेछन् जसले गर्दा तपाईंको जीवनसाथी फेरी तपाईंमा समर्पित हुनेछन्।
तुला- तपाईं यात्रा गर्न निकै कमजोर भएकोले लामो यात्राबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस्। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो सामाजिक जीवनलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट केही समय निकाल्नुहोस् र आफ्नो परिवारसँग पार्टीमा जानुहोस्। यसले तपाईंको दबाब मात्रलाई राहत दिंदैन, हिचकिचाहट पनि हटाउँछ। प्रेमीहरूको पारिवारिक भावना अत्यधिक विचारशील हुनेछ। तपाईंले प्रदान गर्न सक्नुहुने निश्चित नभएसम्म केहि प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। कुनै पनि समस्यालाई हटाउनको लागि इच्छा भएमा केही पनि असम्भव हुँदैन। तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई यस्तो काम गर्न सक्नेछन् जसले गर्दा तपाईंको जीवनसाथी फेरी तपाईंमा समर्पित हुनेछन्।
वृश्चिक-सवारी चलाउँदा होशियार हुनुहोस्। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। तपाईंले आफ्नो घरको वातावरण परिवर्तन गर्न अघि सबैको अनुमोदन लिएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। रोमान्सले तपाईंको हृदय र मनमा शासन गर्नेछ। अधिनस्थ वा सह-कार्यकर्ता अत्यधिक सहयोगी हुनेछन्। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई आफ्नो स्वर्गदूतको पक्ष देखाउनेछन्।
धनु-तपाईंले आफ्नो शारीरिक शक्ति कायम राख्न खेलमा आफ्नो समय बिताउने सम्भावना छ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। छिमेकीसँग झगडा गर्नाले तपाईंको मुड बिग्रिन सक्छ। तर आफ्नो स्वभाव नबिगार्नुहोस किनभने यसले मात्रै आगोमा इन्धन थप्ने काम गर्दछ। तपाईंले सहयोग दिनु भएन भने तपाईंसँग कसैले झगडा गर्न सक्ने छैन। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आज आफ्नो प्रेमीलाई निराश नबनाउनुहोस् किनकि पछि पछुताउनु पर्न सक्छ। तपाईंले प्रत्येक कदममा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नुभयो भने – सफलता निश्चित तपाईंको हो। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। विवाह भनेको एकै छानो मुनि बस्नु मात्र होइन। आफ्नो साथीसँग केहि समय बिताउनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
मकर- एउटा मित्रको ज्योतिष निर्देशनले तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। आफ्ना परिवारका सदस्यहरू प्रति तपाईंको हावी मनोवृत्तिले मात्र अनावश्यक तर्क सुरु हुनेछ र दोषारोपण ल्याउन सक्छ। आफ्नो आवेग नियन्त्रण गर्नुहोस्, यसले तपाईंको प्रेम सम्बन्धलाई खतरामा पार्न सक्छ । शुरू गरेका नयाँ जिम्मेवारीबाट आशा कम हुनेछ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। तपाईंले आफ्नो जोडीबाट कम ध्यान दिइएको महसुस गर्न सक्नु हुनेछ, तर दिनको अन्तमा उनी तपाईंको लागि नै व्यवस्था गर्न व्यस्त थिए भन्ने बुझ्नु हुनेछ।
कुंभ-अत्यधिक प्रभावशाली मान्छेको सहायताले तपाईंको नैतिकतामा ठूलो बढावा दिन्छ। वित्तीय अवरोधबाट बच्नको लागि आफ्नो बजेट हेर्नुहोस्। आफ्नो सन्तानको लागि योजना बनाउने उत्कृष्ट दिन। रोमान्टिक मुडमा अचानक परिवर्तन हुनाले तपाईंलाई धेरै नराम्रो लाग्न सक्छ। कठिन चरण पछि, आज तपाईंको काममा केहि राम्रो कुरा हुनाले आश्चर्य हुनेछ। आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ। आफ्नो साथीको आलस्यले आज धेरै कार्यहरुमा बाधा पर्न सक्छ।
मीन-तपाईंको आकर्षक व्यवहारले ध्यान आकर्षित गर्नेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। आज तपाईंले अरूको आवश्यकतामा ध्यान दिनु पर्छ तर बच्चाहरुसँग अतिरिक्त उदार हुनाले मात्र समस्या बढ्नेछ। लामो समय पछि आफ्नो मित्रसँग भेट हुने सोचेर गुल्टिंदै गरेको ढुँगा झैं तपाईंको मनको ढुकढुकी बढ्न सक्छ। काममा निरन्तर परिवर्तनबाट तपाईंलाई लाभ हुनेछ। यात्राले तत्काल परिणाम ल्याउने छैन तर भविष्यमा लाभको लागि राम्रो जग बसाउनेछ। तपाईंलाईले आफ्नो जोडीसित पुराना रमाइला रोमान्टिक दिनहरूको आज फेरि कदर गर्नु हुनेछ।